सुझाब लिन मन्त्रीहरू सबै जिल्ला जाने - Naya Patrika
सुझाब लिन मन्त्रीहरू सबै जिल्ला जाने
बुटवल | मङि्सर ०७, २०७५
प्रदेश ५ सरकारको योजना निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरू सबै जिल्ला जाने भएका छन् । प्रदेश विकासको प्रभावकारी योजना निर्माणका लागि टोली बनाएर १२ जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मन्त्री जाने भएका हुन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल गृहजिल्ला दाङ जाने भएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको प्रदेशिक योजना आयोगले विभिन्न टोली बनाएर योजना तर्जुमाको काम अगाडि बढाएको हो । आयोगले गर्ने कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुने भएका छन् । योजनाको आधारपत्र तयारीका क्रममा प्रदेशका सबै जिल्लामा सुझाब संकलन गर्न पाँच टोली अहिले जिल्ला खटिएका छन् ।
प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ७ मंसिरदेखि सुझाब संकलन सुरु गर्ने बताए । उनले आगामी चैतभित्र योजना निर्माणको काम सक्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए । निर्धारित समयमा पूर्ण दस्ताबेजका रूपमा तयार पार्ने र आगामी बजेट योजनामा आधारित हुने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
सांसददेखि विज्ञसम्मको सुझाब लिइने
आयोगले जिल्लागत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुझाब लिने भएको छ । संघसंस्थाका प्रतिनिधिदेखि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाब लिइने उनले बताए । ७ मंसिरमा रुकुम र रोल्पामा सुझाब संकलन गर्न दुई टोली बुधबार नै ती जिल्ला खटिइसकेका छन् । पाँचवर्षे विकास योजनामा कुन–कुन क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चालू वर्षलाई योजना निर्माणको र कानुन निर्माण वर्षका रूपमा लिएको बताएका छन् ।
पाँच कार्यदलले ४१ विषयमा योजना बनाउँदै
प्रदेश योजना आयोगले ४१ विषय क्षेत्रहरू छुट्याएर योजनाका काम गरिरहेको छ । ती क्षेत्रमा अध्ययन गरेर दस्ताबेज बनाउन ५ वटा कार्यदलले काम गरिरहेका छन् । अहिले जिल्लागत रूपमा सुझाब लिन पनि कार्यदल लागेका छन् । प्रदेशको विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रहरू कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरी योजनाबद्ध विकासका लागि खाका बनाउने गरी काम भइरहेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । सुरुमा आधारपत्र बनाउने र पछि पूर्ण दस्ताबेज तयार पार्ने गरी काम भइरहेको उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
पाँचवटा कार्यदलमा तीनवटाको नेतृत्व आयोगकै एकजना उपाध्यक्ष र दुईजना सदस्यले गरेका छन् । दुईवटा कार्यदलको नेतृत्व मुख्यमन्त्री कार्यालयका दुई सचिवले गरेका छन् । कार्यदलमा मन्त्रालयका सचिवहरू, योजनाविज्ञहरू छन् । यी कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रहरूको बाँडफाँड गरी ती क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै योजना बनाउन लागिपरेको श्रेष्ठले बताए । पछि ती योजनाहरूलाई आयोगले एक ठाउँमा राखेर अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ ।
योजना बनाउने क्रममा छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाब लिने पदाधिकारीको भनाइ छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूका विज्ञहरू खोजी गरी ल्याएको र उनीहरूको सुझाब तथा राय लिने तयारी पनि भइरहेको उपाध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले बताए । २३ मंसिरसम्ममा प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा सुझाब संकलनको काम सकिनेछ ।
सुझाब लिन एक मन्त्री एक जिल्ला जाने
सुझाब संकलनमा प्रदेशका मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुने भएका छन् । प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार सुझाब संकलनका क्रममा योजना आयोगले गर्ने सबै कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरूको पनि सहभागिता हुने भएको छ । प्रत्येक कार्यक्रममा एक–एक मन्त्रीको सहभागिता रहने बताए । नवलपरासी, प्युठान र दाङको कार्यक्रममा मन्त्री चौधरी सहभागी हुने कार्यक्रम छ । दाङमा मुख्यमन्त्री नै सहभागी हुने उनले बताए ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार सुझाब संकलनका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सांसद, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता हुनेछ । ती सहभागीले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ ।